“Gobolka Awdal Khayrka Somaliland Ayaa Ka Bilaabma Wixii Dadka Kala Fogaynaayana Gobolka Meeli Ugama Banaana”. Wasiir Ku-xigeenka Waxbarashada Cali Xaamud. | Salaan Media
“Gobolka Awdal Khayrka Somaliland Ayaa Ka Bilaabma Wixii Dadka Kala Fogaynaayana Gobolka Meeli Ugama Banaana”. Wasiir Ku-xigeenka Waxbarashada Cali Xaamud.
(Sm-Hargaysa) Wasiir ku-xigeenka Waxbarashada Somaliland Cali Xaamuud Jibriil, ayaa arrin qadaf ah ku tilmaamay, hadalkii Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee UCID Eng: Faysal Cali Waraabe ka sheegay Magaaladda Boorame, wuxuuna Wasiirku sheegay in aanay qaban shacabka rer Awdal dhawaaqa uu Gobolkooda la soo doontay. Sidaana wuxuu ku sheegay maruu caawa la soo xidhiidhay Shabakadda Wararka ee Somalilandtoday.com isagoo ku sugan Magaaladda Hargaysa. Ugu horeyn Mud: Cali Xaamud oo arrimhaas ka hadlaaya waxaa hadaladiisi kamid ahaa.
“Waxaan doonaya inaan ka hadlo dhacdo laga yaabo inay masuuliyiin hore ka hadleen, taas oo aan anigu dhinac kale ka eegaayo, isla markaana aan jeclaystay inaan ummadda u cadeeyo . Arrintaasi waxay tahay hadalkii uu Saxaafadda uu soo mariyay Guddoomiyaha Xisbiga UCID, kaas oo wakhtiga uu Saxaafadda ku bahinaayay uu ku sugnaa Magaaladda Boorame ee xarunta Gobolka Awdal. Runtii anoo ixtiraamaya Guddoomiyaha waxaa haboonayd hadduu hadalkaasi ku jiray uurkiisa, in aanu safarka la sii galine uu Hargaysa ka sheego. Waayo gobolka Awdal khayrka Somaliland ayaa bilaabma, meelna ugama banaana wax dadka lagu kala fogaynaayo. Guddoomiyuhu wuxuu yidhi shir wadatashi Qaran ah ayaan qabanaya bisha June, kaas oo aan kala hadlay Saladiinta Gobolka Awdal sidii ay uga soo qayb gali lahayeen, waxaan halkan ka cadaynayaa hadaanu nahay siyaasiyiintii iyo masuuliyiintii Gobolka Awdal in aanan arrintaas waxba ka ogayn, mana garanaayo waxaa ku kalifay Guddoomiyaha UCID.”
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa intaas ku daray. “Faysal waxaan ogaa isagoo Xisbi kamid ah Xisbiyada Qaranka madax ka ah, cida hawshan u igmatay runtii garan maayo, waayo dalku nidaam ayuu leeyahay, loo maro shuruucdiisa iyo cidii hunguri hayaba. Dalka Somaliland waa dimuquraadi waxaa loo ogolyahay Xisbigu inuu shiro, is abaabulo isla markaana rayigiisa cabiro, lakiin in Xisbi Shir beleed qabto sharciyadaas meel ay qaynuunka dalka kaga jirto maan arag anigu. Waxaan markale sheegayaa anoo xogogaal u ah Gobolka iyo guud ahaan Somaliland, in aanay ka jirin wax yaala aanay ahayn dhawaaqa Guddoomiyaha UCID.”
Wasiir ku-xigeenka Waxbarashada Somaliland ali Xaamud Jibriil, ayaanu waydiinay su’aal ahayd sababta uu hadalkaas u daba socdo mar haddii ay masuuliyiin dhawr ahi ka hadleen, wuxuuna ku jawabaay. “Masuuliyiin iga horeysay oo ka hadashay way jirtaa, lakiin waxaan anigu ummadda u cadaynayaa in aanu shirkaas uu ku baaqayn ahayn, wax ka jira Gobolka, isla markaana ciduu kalsooni kaga haystaa jirin. Sidoo kale wuxuu hadalkaygu daaran yahay sababta uu Guddoomiyaha UCID arrin qayral dastuuri ah ula doontay dhawaaqeeda Gobolka Awdal.”